Sidee ayuu ku burburay mooshinkii madaxweynaha Hirshabeele • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Hirshabelle / Sidee ayuu ku burburay mooshinkii madaxweynaha Hirshabeele
Sidee ayuu ku burburay mooshinkii madaxweynaha Hirshabeele
October 8, 2018 - By: Abdirisak Faamoos
Mooshinkii dhawaan laga keenay madaxweynaha maamulka Hirshabeele Maxamed Cabdi Waare ayaa burburay kadib markii xildhibaanada mooshinka ka keenay ay sheegeen in ay ka laabteen mooshinkii kalsooni kala noqoshada ee ay maalmo kahor ka keeneen.
Kulan habeenimadii xalay madaxtooyada Hirshabeelle ku dhexmaray Madaxweynaha maamulkaasi Hirshabelle ,gudoonka barlamaanka iyo qaar badan oo kamid ah xildhibaanadii mooshinka ka keenay ayaa lagu go’aansaday in la laalo mooshinka dibna loo soo celi wada shaqeyntii madaxda maamulka iyo barlamaanka Hirshabeele.
Cismaan Barre Maxamed guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle oo ku dhawaaqayay go’aankii ay xildhibaannada Hir-Shabeelle ay kaga laabteen mooshinka,ayaa sheegay in markii horaba mooshinkan uu ahaa canaan loo jeedinayay madaxweyne Waare iyo golahiisa wasiirada si ay u guutaan waajibaadka loo xilsaaray sida dib u heshiisiinta, amniga, dhaqaalaha iyo moosintaanka marxaladaha adag ee uu maamulka hirshabeele marayo.
Go’aankan ay xildhibaanada barlamaanka Hirshabeelle uga labteen mooshinkii ay ka keeneen madaxweynaha maamulkaasi Maxamed Cabdi Waare ayaa fajac iyo layaab ku noqday dadka sida dhow ula socday arimahan maadama xildhibaanada markii ay mooshinka keenayeen ay wacad ku mareen in marka ay isdhaafinayaan madaxweyne Waare iyagoo weliba xiligaasi dowlada federaalka ku dhaliilay in ay faragalin ku hayso mooshinka ayna kuguda jirto sidii loo joojin lahaa.
Maamulka Hirshabeelle ayaa kamid ah maamuladii uu aas aasay madaxweynihi hore ee Soomaaliya Xasan Sh Maxamuud,waxaana tan iyo xiligii maamulkan la unkay uu ka bixi waayay mooshino isdaba joog oo weliba la xasuusto in madaxweynihii kan ka horeeyay uu ku baxay mooshin kalsooni kala laabasho ay ka keeneen badi xildhibaanada Hirshabeele.
Bishii October ee sanadkii 2017kii ayay ahayd markii la aas aasay maamulkan madaxweynana loo doortay Cali Cabdulaahi Cosoble,waxaana xiligaas la xasuusta in dalka uu ku jiray kala guur siyaasadeed maadama mudo-xileedkiisa uu gaba gabo ku dhawaa madaxweynihii Soomaaliya ee xiligaas Xasan Sh.Maxamuud.
Hirshabeelle waa maamul ka kooban labo gobol Shabeellaha dhexe iyo Hiraan ,xiligii laa aas aasayay waxaa hareeyay muran ku aadan hab qeybsiga awoodeed iyo dhul ee Maamul goboleedkan sida iswaafajinta caasimada oo la rabay in laga dhigo degmada Buulo Burde oo ka tirsan Hiiraan iyo doorashada madaxweyne kasoo jeeda gobolkaasi taasoo caqabad ku noqotay dhismaha Hirshabeele walow markii dambe lagu heshiiyay in caasimada maamulkani laga dhigo Jowhar oo xarun u ah Shabeelaha Dhexe.
Hirshabeelle waxa uu shan ku noqday maamul goboleedyada xiligan ka jira dalka isagoona dhabaha u xaaray hirgalinta nidaamka federaalka ee ay qaadatay Soomaaliya tobon sano iyo dheeraad ka hor,waxaana madaxweynihii aas aasay xiligaas Xasan Sheekh Maxamuud uu tan iyo xiligan ku faanaa libinta aas aaska maamulkan guri dambeyska u ah federaalka Soomaaliya.